Shilkii ugu horeeyey oo haweenay gaarigeeda lagu gubo dalka Sacuudiga… – Hagaag.com
Shilkii ugu horeeyey oo haweenay gaarigeeda lagu gubo dalka Sacuudiga…
Posted on 5 Luulyo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Hay’adaha ammaanka Sacuudi Carabia ayaa xiray labo qof oo lagu eedeeyey in ay gubeen gaari haweenay iska laheyd magaalada barakeysan ee Makkah, kadib tobon maalmood oo ka soo wareegtay ogolaanshaha wadida haweenka ee gawaarida.
Imaarada magaalada barakeysan ayaa bartooda Twitter-ka ugu dhowaaqay in habeenkii Arbacada ay qabteen labo qof oo lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen gubida gaariga Salma Sharif xaafada al-Jamoum, waxaana loo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta guud.
Si kastaba ha ahaatee, Sharif (31 jir) oo ka shaqeeysa mihnada xisaabaadka, ayaa u xaqiijisay warbaahinta maxaliga ah in gaarigeeda loo gubay si ula kac ah, ragga gubayna ay ka soo horjeedaan baabur wadista haweenka.
Wargeyska Okaz ayaa ka soo xigtay dhibanaha oo u sheegtay in mushaarkeeda aan ka badneyn 4 kun oo riyaal oo qiyaastii ($1066), waxay nuskiisa u qoondeysay darawalkii u qaadi jiray xarunta shaqadeeda iyo marka lagu daro dhaqdhaqaaqa waalidkeed oo waayeel ah.
Bishii Juun 24-keedii ayey aheyd markii dumarka Sacuudi Carabiya ay u dabbaaldegeen ogolaanshaha wadida gawaarida markii ugu horeysay taariikhda. Sida laga soo xigtay Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, 120,000 oo haween ah ayaa soo codsaday ruqsadda darawalnimada.